विचार : कसरी नेपालले ‘विज्ञान कूटनीति’ बाट फाइदा लिन सक्छ।::Jalpa Khabar
Published on: ११ आश्विन २०७७, आईतवार ११:५७
काठमाडौ : चान-मो पार्क एक कम्प्युटर वैज्ञानिकको साथसाथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कोरियाको प्योंगयांग विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय (PUST) मा कुलपति छन्। उनी एक अमेरिकी नागरिक हुन् जसले मेरील्याण्ड विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन्। पार्क विज्ञान कूटनीति मार्फत उत्तर कोरियाली वैज्ञानिकहरुलाई विश्व स्तरमा परिचय दिन उत्सुक छ।
२००७ सालमा पर्योग विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय (PUST) बाट सेवानिवृत्त भएपछि पार्कले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिका लागि विज्ञान र प्रविधि सल्लाहकारको रूपमा काम गर्यो। २०१५ मा, उनले सियोलमा विज्ञान पत्रकारहरूको विश्व सम्मेलनमा “कसरी दक्षिण र उत्तर कोरियाली वैज्ञानिकहरु साइंस डिप्लोमेसी मार्फत सम्बन्ध बढाउन सक्छ” भन्ने विषयमा एउटा प्रस्तुतिकरण दिए।
मैले पनि यही सम्मेलनमा भाग लिएको थिएँ र ‘नेपालमा २०१५ को विनाशकारी भूकम्प’ मा प्रस्तुति दिएकी थिएँ। त्यो समयमा, मैले पार्क भेट्ने र एक विकासोन्मुख राष्ट्रले विज्ञान कूटनीतिबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने अवसर पाएँ। त्यसबेलादेखि हामी सधैं नजिकको सम्पर्कमा छौं।
उत्तर कोरिया यसका छिमेकी देश – दक्षिण कोरियासँग मात्र नभई युएसए र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग पनि लामो समयदेखि विवादमा रहेको छ। उत्तर र दक्षिणमा कोरियाको विभाजन पछि, यी दुई देशहरू कुनै पनि गतिविधिमा सहयोग गर्न असमर्थ छन्।
यद्यपि, २००० सालमा पोयe्ग विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय (PUST) को स्थापना पछि, विज्ञान कूटनीतिले आफ्नो गति हासिल गर्यो। PUST दक्षिण र उत्तर कोरिया दुबै सरकारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्दछ। अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा, चीन, भारत, फ्रान्स, स्विजरल्याण्डलगायत विश्वभरका प्रोफेसरहरूले छात्रवृतिमा विद्यार्थीहरूलाई भाषण दिइरहेका छन्।
आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्दै प्रोफेसर पार्कले भने कि विभिन्न देशहरूसँगको राजनीतिक तनावको बाबजुद पनि उत्तर कोरियामा विज्ञान र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा कुनै बाधा छैन। “विज्ञान र टेक्नोलोजीले धेरै तरिकाले विश्वभरि शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छ,” उनले थपे। दक्षिण कोरियाको पोह विश्वविद्यालय र उत्तर कोरियाको पोयg्ग विज्ञान र टेक्नोलोजी विश्वविद्यालयले गरेको विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धमा संयुक्त अनुसन्धान विज्ञान कूटनीतिको राम्रो उदाहरण हो।
पुस्ट उत्तर कोरिया र अन्य देशहरू बीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार मा एक पुल को भूमिका खेल्दै आएको छ। विज्ञान कूटनीति यस मिशनको एक अपरिहार्य हिस्सा भएको छ। जब सेप्टेम्बर १, २०१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरियाको बीचमा तनाव बढ्यो, उत्तर कोरियाली सरकारले अमेरिकी नागरिकहरूलाई उत्तर कोरिया भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगायो। त्यसबेलादेखि प्रोफेसर पार्क उत्तर कोरिया जान असमर्थ छ। यद्यपि उनी प्राय: दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्दछन्।
उत्तर कोरियाको सरकारले अमेरिकीहरूलाई उत्तर कोरियामा प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ, विज्ञान कूटनीतिले अन्तर-राष्ट्र अनुसन्धान गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ, जुन विज्ञान कूटनीतिका फाइदाहरूको मात्र प्रतिबिम्ब हो।
विज्ञान कूटनीति को इतिहास
वैज्ञानिक सहयोगको माध्यमबाट साझा समस्याहरू समाधान गरेर सृजनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी कायम गर्ने अभ्यास भनेको विज्ञान कूटनीति हो। विज्ञान कूटनीतिलाई सामान्यतया कूटनीति को क्षेत्र मा एक नयाँ पद को रूप मा दर्साइएको छ। विज्ञान कूटनीति को छाता नेटवर्क अन्तर्गत, विज्ञान र प्रविधि, अनुसन्धान र ईन्जिनियरि etc. आदि क्षेत्रमा विभिन्न देशहरुको संयुक्त हात छ।
कूटनीतिमा यो नयाँ अवधारणा कहिले विकसित भयो भनेर उल्लेख गर्न गाह्रो छ तर १ 15 औं शताब्दीमा स्पेन र पोर्चुगलले अमेरिकी, अफ्रिकी र एसियाली देशहरू उपनिवेश गरेपछि यो व्यवहारमा आएको देखिन्छ। यी देशहरूले १ 15 औं शताब्दीमा हतियार र हतियारहरूको विकास गर्न थालेका थिए।
‘शीतयुद्ध’ अन्त्य भएपछि, साइंस डिप्लोमेसी २००० को शुरुमा चरम सीमामा पुगेको थियो। राजनीतिक तनाव भएको देशहरूले विज्ञान र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोण दिएर साझेदारी सुरु गरे। उत्तर कोरिया, रसिया र अमेरिका जस्ता देशहरूले एक साथ अनुसन्धान गतिविधिहरू सञ्चालनमा हात बढाए।
हालका वर्षहरुमा, विज्ञान कूटनीति सबै देशहरुमा चासोको क्षेत्र भएको छ किनकि यसले विकासोन्मुख देशहरुलाई विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट विकसित देशहरुसंग जोड्दछ। नेपालले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान र प्रविधि एकेडेमीको सहकार्यमा विज्ञान कूटनीतिबारे छलफल सुरु गरिसकेको छ। आठौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगले हालसालै “विज्ञान कूटनीति” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
नेपालमा विज्ञान कूटनीति हाल प्रारम्भिक चरणमा छ।
नेपालको अर्को चाल के हुन सक्छ?
नेपाल विज्ञान र प्रविधि एकेडेमी (नेस्ट) का कुलपति डा। सुनील बाबु श्रेष्ठ विश्वास गर्नुहुन्छ कि नेपालले विज्ञान कूटनीतिको क्षितिज बढाउनु पर्छ र यसलाई विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्दछ। “हामी यस्तो विकासोन्मुख देश हौं, यसले विदेशी टेक्नोलोजी सिक्न र आयात गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। हामीले उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा, विज्ञान कूटनीति उपयोगी हुन सक्छ। ”
नेपालले यहाँ रहेको ‘स्वदेशी टेक्नोलोजी’सँग धेरै गर्न बाँकी छ। नेपाल परम्परागत प्रविधिमा धेरै धनी छ। त्यस्ता प्रकारका प्रविधिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। “कूटनीतिमार्फत हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परम्परागत टेक्नोलोजीको अभ्यासलाई विकास गर्न सक्यौं भने नेपालले नाम र प्रख्यातता कमाउन सक्छ,” डा श्रेष्ठले थपे।
लामो समयदेखि कूटनीतिक नियोगहरूमा नेपालको केवल आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको मुख्य चासो भएको छ। विज्ञान कूटनीतिको महत्त्वबारे सरकार अनजान देखिन्छ। नेपालले आफ्ना वैज्ञानिकहरूलाई कूटनीतिक नियोगमा सायद सामेल गरेको छ। परिणामस्वरूप, नेपाल वार्तालाप गर्न र मौसम परिवर्तनमा कडा दृष्टिकोण राख्न असमर्थ छ।
“नेपालले वायुमण्डलमा ग्रीन हाउस ग्यासको मात्रा थोरै मात्र देखाए पनि यसले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंगको ठूलो असर सामना गरिरहेको छ। विज्ञान कूटनीतिले यो समस्या समाधान गर्न र वार्ता गर्न मद्दत गर्दछ, ”डा श्रेष्ठले भने। वैज्ञानिक संलग्नक कूटनीतिक नियोगहरूको एक अपरिहार्य हिस्सा हो।
कुनै पनि देशहरू जसले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभावको सामना गरिरहेका छन्, ग्लोबल वार्मिंगका लागि थोरै योगदानका साथ ‘हरित मौसम कोष’ प्राप्त गर्दछन् जसलाई चीन, अमेरिका र अन्य देशहरू जस्तै जलवायु परिवर्तनमा उच्च योगदान पुर्‍याउने देशहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।
यस्तो कोष खोज्ने देशहरूले राम्रो वैज्ञानिक सम्झौताको साथ आउनुपर्दछ। खराब प्रस्तुतीकरण र वार्तालापका कारण नेपाल “हरी मौसम कोष” को योग्य रकम प्राप्त गर्न असफल भएको छ। विज्ञान कूटनीतिको सहयोगमा समग्र परिदृश्य फरक हुने थियो।
उपयुक्त टेक्नोलोजीको चयन र यसको वितरण
उपयुक्त टेक्नोलोजीको छनौट र यसको राजनीतिक र आर्थिक मूर्तिको आधारमा कुनै पनि राष्ट्रको लागि वितरण पूर्व विज्ञान र प्रविधि मंत्री गणेश शाहको लागि विज्ञान कूटनीति को एक प्रमुख काम हो। “नेपालले विकसित देशहरूले विज्ञान कूटनीतिको माध्यमबाट उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेका उच्च-टेक मेशिनरीहरू सिक्न र परिचय गर्न सक्दछन्,” उनले थप वर्णन गरे।
नेपाल विश्वको जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरू मध्ये एक हो। विकासोन्मुख र आर्थिक तवरले कमजोर राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजान असक्षम भएको छ। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यस क्षेत्रमा विज्ञान कूटनीति उपयोगी हुन सक्छ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणका मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुको ध्यानाकर्षण गर्न “सगरमाथा सम्बद्” को आरम्भ गरेको थियो। यद्यपि घटना विश्वव्यापी कोविड-१९ महामारीको कारण मार्चदेखि स्थगित गरिएको छ।
विज्ञान कूटनीतिले नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्रमा पनि नयाँ क्षितिजहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। हालसालैका वर्षहरूमा नेपालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू पनि गर्न थालिसकेको छ। शाहले भने, “विज्ञान डिप्लोमेसी एआई सम्बन्धित परियोजनाहरुमा धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
टेक्नोलोजी संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। कमजोर कूटनीतिले गर्दा विकसित देशबाट नयाँ टेक्नोलोजी आयात गर्ने क्रममा अधिकांश गरिब र न्यून-विकासशील देश भ्रष्टाचारको सिकार हुन्छन्।
शाहले भने, ‘नेपालजस्ता देशहरू विज्ञान कूटनीतिको माध्यमबाट यस्ता समस्याहरूबाट मुक्त हुन सक्छन्।’
वैज्ञानिक कूटनीतिको माध्यमबाट विश्वभरिका वैज्ञानिकहरू बीच वैज्ञानिक सहयोगले विकासोन्मुख देशहरूलाई उपयुक्त प्रविधिहरूको छनौट र वितरणमा मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन तर विश्वव्यापी शान्ति र अखण्डता कायम गर्न पनि मद्दत गरेको छ।
कोविड-१९ र वैज्ञानिक साझेदारी
वैज्ञानिक सहयोग भनेको चलिरहेको २०१७ महामारीको विरूद्ध लड्नको लागि एक महत्वपूर्ण हतियार हो। विकासशील देशका वैज्ञानिकहरूले नयाँ आविष्कार र आविष्कारहरू विकसित र सक्षम देशहरूमा भइरहेकोमा सजग हुनुपर्दछ।
विश्व भरका वैज्ञानिकहरूले हात मिलाएर विज्ञान कूटनीति मार्फत तदनुसार सहकार्य गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता सहकार्यहरू आज मानवजातलाई कोविड-१९ महामारीबाट जोगाउनु आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक भीम भुर्तेल भन्छन कि नेपाली वैज्ञानिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुसंग सम्पर्क गर्नुपर्दछ र सहयोगी रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्छ।
विज्ञान कूटनीति विज्ञान, टेक्नोलोजी, जनस्वास्थ्य, लघु जीवविज्ञान, जैव-टेक्नोलोजी र अन्य धेरै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको साथ साझेदारी विकास गर्न धेरै सहयोगी हुनेछ।
विज्ञान कूटनीति को क्षेत्रमा प्रयास भइरहेको छ
विज्ञान कूटनीति नेपालको लागि एकदम नयाँ अवधारणा हो। यद्यपि नेपाली वैज्ञानिकहरू उत्सुक छन् र बिस्तारै यसमा छिर्दैछन्। नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (एनएएसटी) जस्ता विभिन्न वैज्ञानिक फोरमले नेपालमा विज्ञान कूटनीति उपयोगिताबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन। नास्टका अनुसार गत वर्ष एकेडेमीले विज्ञान कूटनीति सम्बन्धी आम जनतामा चेतना जगाउने कार्यशाला आयोजना गरिसकेको छ। कूटनीतिज्ञ लगायत विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूले उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका थिए।
यस कार्यक्रममा विज्ञान र कूटनीति जस्ता विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए जस्तै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि, राष्ट्रिय नीति आयोग, विदेश मामिला मन्त्रालय र अन्य धेरै, श्रेष्ठ याद गर्दछन्।
“हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञान कूटनीतिको प्रभावकारी अभ्यासका लागि ‘साइन्स डिप्लोमेसी फोरम’ गठन गर्न लागेका थियौं तर कोविड-१९ महामारीको कारण हाम्रो योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनौं, ” श्रेष्ठले भने। यद्यपि, नेपालमा कूटनीति भएदेखि नै नेस्टले बारम्बार छलफल र प्रमोटनका लागि कार्यक्रम र कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारसँग नयाँ टेक्नोलोजीहरू आयात गर्ने क्रममा विदेशमा काम गर्ने कुनै खास विभाग छैन।
सबैभन्दा पहिले, नेपाल सरकारले विज्ञान कूटनीतिको छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्नेछ जुन शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय नीति आयोग र विदेश मामिला मन्त्रालय जस्ता अन्य कूटनीतिक विभागहरूको एक हिस्सा हुनेछ। प्रत्येक सरकारी विभाग मा एक विज्ञान सल्लाहकार हुनु पर्छ।
सरकारले ‘कूटनीतिमा विज्ञान’, ‘कूटनीति लागि विज्ञान’, र ‘विज्ञानको लागि कूटनीति’ को अवधारणा विकसित गर्नुपर्दछ।
पूर्व मन्त्री शाहका अनुसार सरकारले विज्ञान कूटनीतिको सामना गर्न शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयमा तुरुन्त एक केन्द्रित व्यक्ति वा छुट्टै विभागको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। “यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको विज्ञान कूटनीतिलाई औपचारिक र अत्यावश्यक धक्का दिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू बीच साझेदारीको वातावरण बनाउनेछ।”
यसका साथै अनुसन्धान र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सरकारले उनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। विज्ञान कूटनीति सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान र टेक्नोलोजीको साझा एजेन्डा हुनुपर्छ।
कार्की नेपाल विज्ञान पत्रकार फोरमको साथ छन्